महिलामाथिको हिंसा बढेपछि अब किशोरीहरुलाई धमाधम आत्मरक्षा तालिम « News24 : Premium News Channel
महिलामाथिको हिंसा बढेपछि अब किशोरीहरुलाई धमाधम आत्मरक्षा तालिम
कैलाली, २० असोज । मुलुकभर बढ्दो कहालीलाग्दो महिला हिंसाले अहिले धेरैलाई अत्याएको छ । पढ्न गएकी छोरी साँझ नपर्दै घर नआए अभिभावकहरु आत्तिनु नौलो विषय रहेन अब । बढ्दो बलात्कार र यौन हिंसाका घटनाले अभिभावकमा मानसिक तनाव थपिरहेको छ । यहि तनाव मुक्त गर्न कैलालीमा शनिबारदेखि महिलाकालागि आत्म सुरक्षा शिविर सुरु गरिएको छ ।
कसैले गलत नजरले छुन खोजे के गर्ने ? बलात्कार गर्न खोजे कसरी त्यसको प्रतिकार गर्ने ? यहि प्रश्नको उत्तर यतिबेला हरेक महिलाको मनमा उब्जिएको छ । तर, अब कैलालीका महिलालाई यस्तो सम्भावित डरलाई भगाउने कला सिक्न व्यस्त बनेका छन् । हिंसात्मक गतिवधि गर्नेलाई जवाफ दिन कैलालीका महिलाले आत्मसुरक्षा प्रशिक्षण लिइरहेका छन् ।
शनिबारदेखि सुरु भएको शिविरमा महिलाले आत्म सुरक्षाका बारेमा विभिन्न मार्सलआर्ट सिकेर अरुलाई पनि सिकाउने भएका छन् । महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि फलदायी हुने आशा गरिएपनि आत्म सुरक्षा तालिमले महिलालाई प्रतिकार गर्न सफल हुनेछन् । ७ दिने तालिममा अब्बल नबनेपनि आत्मबल बढाउन भने निकै मद्दत गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
कञ्चनपुर उल्टाखामकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्याले सिंगो राष्ट्र स्तब्ध छ । यस्तो समयमा नौलो प्रयोगसहित धनगढीमा सुरु गरिएको तालिमले पछि निकै त्रसित बनेका महिलालाई आत्म सुरक्षाबारे दिइने प्रशिक्षणले प्रशिक्षणमा सहभागी १ हजार ७ सय बालबालिका र किशोरीलाई ठूलो सहयोग पुग्नेछ ।
सुदुर पश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सांसद पनि कराते संघको अभियानप्रति निकै गर्व गर्दै तालिमले प्रदेशमा महिला हिंसा न्यूनीकरण हुने विश्वास व्यक्त गर्न थालेका छन् । प्रत्येक स्थानीय तहले महिलाको आत्मबल बढाउन यस्तै तालिमको सञ्चालन गरे महिला हिंसा केही हदसम्म न्यूनीकरणमा बल पुग्ने थियो ।